अब रूखमा विज्ञापन गर्दा कारबाही, आजदेखि नै लागू हुने ! — Arthatantra.com
विहिबार, साउन २९, २०७७
Arthatantra.com > प्रवास > अब रूखमा विज्ञापन गर्दा कारबाही, आजदेखि नै लागू हुने !
अब रूखमा विज्ञापन गर्दा कारबाही, आजदेखि नै लागू हुने !
काठमाडौं । चेन्नई कर्पोरेसनले सडकका रूख सुरक्षित बनाउन नयाँ नियम ल्याएको छ । विज्ञापन राखिँदा रूखको मौलिकता हराउनुका साथै सहर कुरूप हुने जनाउँदै चेन्नईले बिहीबारदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ नियम सार्वजनिक गरेको हो ।
अब चेन्नईको सडकमा रहेका रूखमा कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो प्रवद्र्धनका लागि होडिङ बोर्ड राख्दा २५ हजार भारु जरिवानाका साथै तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
चेन्नईले दश दिनभित्र सबै कम्पनीलाई रूखमा रहेका विज्ञापन बोर्ड हटाउन निर्देशन दिएको छ । प्रशासनले दिएको समयभित्र बोर्ड नहटाए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने जनाएको छ । यसैगरी रूखमा किला ठोक्ने क्रियाकलाप नगर्न भनिएको छ । रूखका किला ठोक्दा यसको उमेर कम हुने विश्वास छ ।
धेरै अगाडिदेखि भारतको वनस्पति विज्ञान विभागले रूखमा किला ठोक्न नहुने र बिजुली जडानजस्ता कार्यले यसको आयु घट्ने प्रतिवेदन बुझाएको थियो । विभागले यस्तो काम तत्कालै निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताएको थियो ।
तर, यसतर्फ खासै ध्यान प्रशासनको गएन । पछिल्लो साता चेन्नई कर्पोरेटले एक सर्वेक्षण गरेको थियो । विज्ञापन र किल्ला भएका रूख अन्य रूखका तुलनामा कमजोर देखिए ।
भारतका विभिन्न सहरमा ‘फ्री ट्री’ (खुला रूख) अभियान सुरु भएको छ । सहरलाई हरियाली बनाउन नयाँ रूख रोप्ने र संरक्षण गर्ने यस्तो अभियान सुरु भएको हो । धेरैजसो संस्थानले यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दै बोट–बिरुवामा राखिएका होडिङ बोर्ड हटाएका छन ।-एजेन्सी
२०७६ भदौ २६ गते प्रकाशित
२०७६ भदौ २६ गते ०९:५३ मा प्रकाशित
यी हुन संसारकै सबैभन्दा महँगो वियर पिउने पत्रकार ! कति तिरे एउटा वियरको मुल्य ?
एनआइसी एसियाको २१.०५२% लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका
अर्चना पनेरु फेरि पोखरामा पक्राउ, अहिले प्रशासनमा बयान दिँदै
उन्नति माइक्रोफाइनान्सले प्रस्ताव गर्यो २५ प्रतिशत हकप्रदको निर्णय
पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउन स्मार्ट पार्किङ निर्माण गर्दै कामपा
सोह्र वर्षसम्म खुट्टामा जुत्ता नलगाएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राई
होलीमा १६० पक्राउ